Back-Hung ambanin'ny lalana ho any an-photovoltaic AC rafitra convergence fampidirana singa AMJ1-4003S / 1003HX4 - China Shanghai IPKIS
Ny hafanana sy ny hamandoana Controller
User ny Guide
Back-Hung ambanin'ny lalana ho any an-photovoltaic AC rafitra convergence fampidirana singa AMJ1-4003S / 1003HX4
Overview AMJ1 busbar fampidirana singa dia Modular mampitohy singa fototra natao ny IPKIS telo-dingana maro amin'izao fotoana izao ny sampan-sampana fampidirana. Ny rafitra dia voalamina tsara sy tsara tarehy, ary ny fifandraisana dia mety sy azo antoka. Amin'ny alalan'ny endrika Modular, ny fandidiana sarotra andalana fampisarahana no notsorina mba hanenjanana kokoa fotsiny amin'ny screwdriver. Mandritra izany fotoana izany, ny Module azo spliced ​​araka ny tena ilain'ny sampana, izay indrindra ny asa mamonjy vola lany sy ny habaka, sy ny connec ...
AMJ1 busbar fampidirana singa dia Modular mampitohy singa fototra natao ny IPKIS telo-dingana maro amin'izao fotoana izao ny sampan-sampana fampidirana. Ny rafitra dia voalamina tsara sy tsara tarehy, ary ny fifandraisana dia mety sy azo antoka. Amin'ny alalan'ny endrika Modular, ny fandidiana sarotra andalana fampisarahana no notsorina mba hanenjanana kokoa fotsiny amin'ny screwdriver. Mandritra izany fotoana izany, ny Module azo spliced ​​araka ny tena ilain'ny sampana, izay indrindra ny asa mamonjy vola lany sy ny habaka, sy ny fifandraisana dia tena tsara tarehy.
Soft fifandraisana Mampiasa malefaka varahina mba hifandray Switches trano fisotroana sy ny busbars
Hard fifandraisana dia natao mampiasa hidy varahina sy ny busbars
Lafiny manokana araka ny tena ilaina mba hamantarana ny fepetra arahana, azafady manome antsika ny fampiasana ny fangatahana fanontaniana.
Fampidirana fiara fitateram-bahoaka AMJ2integrated busbar
Main jiro 400A dingana telo-jiro tranga novolavolaina
Zana-jiro 100A dingana telo-jiro tranga novolavolaina
Main fifandraisana soft fifandraisana
Zana-malefaka fifandraisana fifandraisana
● Ny am-boalohany varahina niteraka am-pofoany ho Modular jiro nametraka mivantana.
● vokatra azo Nandamina amin'ny fomba isan-karazany: taolan-tehezany, manaraka mihetsiketsika ao, teo amin'ny manaraka.
● ny Module rehetra dia afaka ny ho malefaka am-pofoany laharana, ny jiro mivantana ambonin'ny Module, Adjustable Heba, indrindra mampihena ny chassis toerana.
● Ny tena laharana sy ny zana-andalana manokana natao clamp rafitra, mety ho samy hafa ny varahina fepetra arahana mifandimby am-pofoana, jiro voly hafa izay fandaharana, mba hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa samihafa.
● fiarovana akorany amin'ny PA66 fitaovana.
● Ny tena andalana avo-tsara varahina.
● fiara fitateram-bahoaka ao anatin'ny fotoana fohy amin'izao fotoana izao hahatohitra (Icw): 18KA ambony;
Narahi-● fifandraisana: telo-dingana /-dingana efatra 250A ~ 800A, malefaka na mafy andalana;
● busbar: avo conductivity nikela voapetaka varahina;
● fiarovana akorany: PA66;
● busbar hateviny: laharana amin'ny 4-10mm;
● sampana fifandraisana: mihoatra ny roa-dingana telo-dingana / mihoatra noho 63A, malefaka na mafy laharana.
Shanghai IPKIS Power Teknolojia Co., Ltd. mifantoka amin'ny Integrated combiner boaty ancillary rafitra sy fotodrafitrasa, herinaratra fizarana tanteraka herinaratra karazana teknolojia fifandraisana fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny fikarohana siantifika fampiasam-bola isan-taona, ny patanty neken'ny fampiharana ny fananganana ny tsara toetra toby, fanodinana fikarohana siantifika dia mahafaly, Shanghai Tech orinasa; ny orinasa tsara amin'ny asa sy ara-teknika tombontsoa ho an'ny rafitra orinasa mba hanome herinaratra fifandraisana vahaolana, miaraka amin'ny asa, ara-potoana sy haingana ny fiaraha-miasa, mba hamorona fanampiny vidiny ho an'ny mpanjifa, ary ny mpanjifa mamorona akaiky fanohanana ny fifandraisana, amin'ny alalan'ny taona maro izany no namorona ny raharaha tsy manam-paharoa modely ary nanorina ny tontolo iainana faribolana mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa ara-pahasalamana. Eo ambany amin'izao fotoana izao ny zava overcapacity, teknolojia lenta sy ny orinasa fampidirana, dia ilaina ny mavitrika hijery hevi-baovao ho an'ny fahaveloman'ny sy ny fampandrosoana ny orinasa madinika.
Product kalitao no karatra raharaham-barotra, noho ny kalitao no mandà ny asa tsizarizary. Isika momba ny tsipiriany, mitohy ny fanatsarana, ity iray ity fanamarinana, dia solontenan'ny mpiasa rehetra ny IPKISer.
Previous: Back-efatra nitaingina-in-iray photovoltaic AC convergence fampidirana singa AMJ1-4003S / 0633SX4
Manaraka: Back-nitaingina ambanin'ny lalana dimy ho photovoltaic AC rafitra convergence fampidirana singa AMJ1-4003S / 1003HX5
8p Natambatra Box
Combiner Box Amin'ny 8strings
DC To As Combiner Box
Electric plastika Junction Box
Energy fahavaratra Box
Parallel Firafitra PV Module Box
PV Array Solar Box DC Combiner String Boxes
PV Combiner Solar Box Panel
Back-Hung telo-in-iray photovoltaic AC converge ...
Miankina enina ho photovoltaic AC convergence int ...
SMC boaty plastika
Back-nitaingina ambanin'ny lalana dimy ho photovo ...
Four-in-iray taolan-tehezana avy amin'ny fifanakalozana amin'ny AC conve ...
Mihantona nidina ny lalana telo ho PV AC conver ...